भेडाको उनजस्तो..... एउटा कथाको खोजीमा ......: सुचनाको साङ्लोमात्र ।
यो सुचना टासेर अर्थ मन्त्रालयले कति आम्दानी गरेको छ , रसुवागढी नाकाबाट ? खोइ को बस्छ यहा अहिले? छैन् कोइ पनि, तर मानिसहरु नेपाल चिनको सिमामा तेतिकै बेखबर घुमिरहेका हुन्छन् । राजस्वको पैसा उठाउने दायित्व निर्वाह गर्न र नियम बनाउनेले यसमा कर्मचारी पनि राख्नु पर्यो नि? नत्र त श्री ५ को सटा नेपाल सरकार लेखेर कुनै जादु या टुनामुना हुने त होइन ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 10:01 AM
श्री ५ को सरकार मेटेर नेपाल सरकार लेखेको जस्तै गरी उनीहरुको मन, मस्तिष्कबाट श्री ५ ले वर्षौ वर्षेखि लादेको सोचलाई पनि मेट्न सके त साँचै जादु नै हुने थियो होला । तर त्यसो हुँदैन । त्यसैले त त्यहाँ बोर्ड मात्र छ, कर्मचारी छैन । अनि कतै कर्मचारी छ सेवा भावना छैन । जहाँ सेवा भावना छ त्यहाँ अभावै अभाव छ ।